Musuqmaasuqa oo badanaa xukun maxkmadeed lagu rido - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Musuqmaasuqa oo badanaa xukun maxkmadeed lagu rido
La daabacay tisdag 2 juli 2013 kl 11.28
BRÅ "sawirka ah in aan musuqmaasuqa la cadeyn karin waa qalad"
Shantii mid kamid ah dacwadooyinka musuqmaasuqa ee ka dhacey dalkan Iswedhen ayaa xukun maxkamadeed lagu ridaa, sidaas waxaa muujineysa warbaxin ay hayadda ka hortaga faldanbiyeedyada BRÅ maanta ka soo saartey musuqmaauqa.
Lars Korsello o ka tirsan hayaddas waxuu sheegey in sawirka ah in musuqmaasuqa yahay mid adag oo la cadeyn karin uu yahay sawir qaldan.
- Waxaa jira sawir ah in musuqmaasuqa yahay wax adag oo aan maxkamad lagu cadeyn karin oo markasta lagu qasaarayo laakiin sidaas ma ahan, ayuu yeri Lars Kursel hayadda ka hortaga faldabiyeedyada.
Waxuu sheegey in mid kamid ah shantii dacwo oo laga gudbiyey musuqmaasuqa laga soo saaro xukun maxkamadeed taas oo ah qayb aad u badan sida ay qabto hayadda ka hortaga fandeniyeedyada BRÅ, madaama musuqmaasuqa yahay wax ay adag tahay in baaritaan lagu cadeeyo.
Hayadda Brå ayaa ukuurgashey dhamaan 700 fal oo ku saabsan musuqmaasuq. Kuwaas oo dhacay intii u dhaxeysey 2003-2011. Keysaskaas oo ku dhawaad 1.200 oo ruux lagu tuhmayey masuqmaasuq. Laalush ugu caadisan ayaa ah lacag cadaan ah ama in ruuxa lagu marti qaado dhoof. Xaalada ugu masuqumaasuqs ee ugu caadisana waxa weeye in shaqsi ama shirkad ay laalushto ruux ka howl-gala xarumaha howlaha guud sida dowladda, demooyinka iyo maamulada gobalada.
Ruuxa laalushka qaata asana waxa weeye.
- Waa nin sarkaal oo da’diisa tahay 50 sanno jir kaasoo leh awood go’aan ama saameyn ku yeelan kara go’aanka asagoo u maraya in uu soo bandhigo xogta ugu haboon si go’aanka loo soo dedejiyo, ayuu yeri. Haweenka ayaa ayagu kuyar falalka musuqmaasuqa ah ee la dacwadeeyo, hadaba maxaa ka dhigey in haweenku yahiin kuwo ay adgatahay in la laaluusho. Laes Korsell?
- Waa su’aal fiican. Waxaana jiri kara sharaxaad la xiriirta lab iyo dhadiga. Hadaan qiyaaso masuqmaasuqa waxuu ka dhacaa xaruumaha ay haweenku ku yaryahiin sida dhismayaasha iyo go’aamada la xiriira bixinta ogalaanshaha dhismayaasha, ayuu yeri.
Horey ayey hayadda qaabilsan tartanka ”Konkurrensverket” ku qiyaastey qandraas gelinta howlaha guud in ay ku kacdo dhaqaalo gaaraya inta u dhaxeysa 500 illaa 600 bilyan oo karoon sannadkii. Waana halkaas, halka ay qatarta ugu weyn tahay in musuqmaasuq ka dhaco, sida uu yeri Lars Korselle oo ka howl-gala hayadda BRÅ.
- Qandaraaseynta ama beecinta howlaha guud lacag badan ayaa laga sameeyaa saas darteed ayey u badan tahay qatarta ah in laysku dayo in saamweyn lagu yeesho go’aanka cida heleysa qandaraaska, ayuu yeri.
Keysaska ku sabsan musuqmaasuqa waxey ku badanyahiin magaalooyinka waaweyn. Stockholm län ayaana ugu badan degmooyinka ay musuqmaasuqa ka dhacaan, taas oo tiro ahaan ah boqolkii 45 dhamaan musuqumaasuqyada dacwooyinka laga gudbiyey. Halka gobolka Skåne uu kaalinta labaad ku jiro oo tiradiisa masuqmaasuqa ay tahay boqolkii 11. Waxaana kaalinta sadexaad ku jira gobolka Västra Götland oo tirado tahay boqolkii toban dhamaan tirada musuqmaasuq ee la dacweeyey. Sadexdan gobol ee waawey ayaa waxaa ku nool kalobar dadka dalkan Iswedhen kuwaas oo isku geyn sadex meelood meel ay ka dhacdo falalka musuqumaasuq ee dalka ka dhacey. Laakiin markii degmo degmo loo eego masuqumaasuqa waxuu ku firiirsanyahay si siman dhamaan dalka oo idil.
- Musuqmaasuqo waxuu ku saabsanaan kara laga bilaabo ruux raba in la siiyo kontrakti guri ama go’aan mahiim ah oo ah ogalaansho dhismo ama qof raba in kormeerayaasha wakaalada caafimaadka in ay dhiaca kale fiiriyaan, ayuu yeri Lars Korsell oo ka howl-gala hayadda ka hortaga faldenbiyeedyada BRÅ.